Ao amin'ny Covid-19 Valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety androany talata 19 mey 2020, tranga tsara miisa 17 no nambara, tamin'ny valiny 1182 naseho nandritra ny faran'ny herinandro lava.
Ny mpitarika ny nosy Cayman dia nanentana ny olona hitandrina, hanao fanazaran-tena amin'ny fanalavirana ny fiaraha-monina, etikety fanasana tanana ary hisaron-tava amin'ny toerana malalaka sy teratany, na dia eo aza ny fanalefahana ny fameperana izay nanomboka nanan-kery tamin'i Grand Cayman.
Tamin'ny valim-panadinana 1182 natao nandritra ny faran'ny herinandro lava (1088 tao amin'ny HSA ary 94 tao amin'ny Hopitaly Dokotera), 17 ny zava-tsoa azo avy amin'ny fandaharana fitiliana notaterina (anisan'izany ny tranga roa tao Cayman Brac ary roa tao amin'ny HMP Avaratra) ary 1165 ireo tsy nety.
Miaraka amin'ireo isa ireo, ny salan'isa antonony tsara dia 1.44% (17 positives amin'ny fitsapana 1182). Ny tahan'ny taha ambony indrindra teo aloha dia 2.57%,
Vita ny fizahana ireo mpiasan'ny fahasalamana voalohany ary efa mandeha tsara ny fitsapana ireo mpiasa an-tsokosoko hafa, ao anatin'izany ireo mpiasa supermarket marobe, ao anatin'izany ny ankamaroan'ny fonja izay efa nozahana toetra; Efa mandeha ihany koa ny fitiliana ho an'ny indostrian'ny fananganana.
Amin'ny tranga tsara 111 hatreto dia 3 no niseho tao Cayman Brac, 12 no simptetika, 43 no simptomatika, tsy misy olona ao amin'ny hopitaly ary 55 ny olona sitrana.
Ny 'toeram-pitsaboana gripa dia nisy fitsidihana 10 teo anelanelan'ny 15 sy 18 May ary ny' hotline flu 'dia 62 ny antso saingy 52 no tsy nifandray tamin'ny soritr'aretina, antso an-tariby toy ny olona manontany momba ny valin'ny fitsapana izany.
Ny fitaovan'ny fanandramana HSA dia hiatrika andro fikarakarana voalahatra amin'ny alakamisy 21 may.
Ny hafatra androany dia hoe miaraka amina tombo-tsoa vaovao 17, izay tsy miteraka soritr'aretina rehetra ary hita tamin'ny alàlan'ny fanandramana nohatsaraina, ny tena famantarana dia ny virus dia mbola momba antsika sy manerana ny fiarahamonina na dia ambany dia ambany aza ny fatra. Ny filana manalavitra tena, manasa tanana tsy tapaka ary misaron-tava amin'ny toerana malalaka dia tsy nihena.
Ny paikadim-panjakana momba ny fanokafana ny toekarena dia ampiharina amin'ny fomba voafehy sy tantanana, mba tsy hihanaky ny viriosy eo amin'ny fiarahamonina ka hanao ny fepetra napetrakay hatreto. Tsy mila ny asa mafy sy ny fahafoizan-tena izay noraisintsika rehetra hatrizay, ho zava-poana ary noho izany dia miroso am-pitandremana sy miadana isika.
Ny fitsapana ny sehatry ny fananganana dia natomboka ary hitohy mandritra ny tapa-bolana manaraka. Ny mpiasan'ny NRA izay nosedraina dia nanangana indray ny làlana ary ny fandrosoana dia natao tamin'ny faran'ny herinandro lava.
Misokatra indray ny toekarena, na miadana aza. Tianay hahita fahombiazana izany; izahay tsy te-hijaly amin'ny fihemorana hita any amin'ny faritra hafa. Ho an'ny ho avy azo jerena dia tsy maintsy ampiharintsika ireo fihetsika ara-tsosialy vaovao noraisina nandritra ny areti-mandringana mandra-pahatongan'ny vaksinina na may ny viriosy.
Izahay dia tsy mieritreritra ny hanokatra ny sisin-taninay raha tsy efa azo antoka ny hanaovana izany.
Hivory rahampitso (Alarobia 20 Mey) ny Antenimiera mpanao lalàna mba hiresaka momba ny volavolan-dalàna maromaro mifandraika amin'ny indostrian'ny serivisy ara-bola. Raha mitohy hatramin'ny alakamisy ny fivoriana dia hahemotra hatramin'ny zoma 22 mey ny fampahalalana ho an'ny mpanao gazety.
Tranga 17 mandritra ny efatra andro, miaraka amin'ny andrana 1182 vita dia mariky ny asa miavaka ataon'ireo izay manao fitsapana.
Ny Nosy Cayman dia nisedra 10% ny isan'ny mponina, nametraka antsika fahavalo tamin'ny fanandramana eran-tany isaky ny loha.
Rehefa manokatra ny toekarena isika, aza avela hiambina. Mijanona ao an-trano raha azo atao.
Asa haingana sy mandaitra dia efa nataon'ny Taleon'ny fonja sy ny mpiasa ao aminy. Ny fisavana ny fonja dia miantoka ny fahasambarana sy ny fiarovana ny mpiasa sy ny voafonja.
Ny sidina famindrana mankany Manila, Filipina amin'ny alàlan'i London amin'ny Sabotsy 23 Mey dia feno izao.
Ny sidina bebe kokoa mankany Miami dia halamina, fa tsy hitondra olona hiverina any amin'ny Nosy Cayman satria efa afaka miasa izao ny toeran'ny Governemanta Mitokana.
Atao ny fandrosoana miaraka amin'ny manampahefana Indiana handamina sidina fialana. Saingy tsy misy fandrosoana amin'ny sidina Jamaika na Nikaragoa amin'ity dingana ity.
Ny mpikambana iray ao amin'ny ekipa logistika sy fanampiana UK dia nanaporofo fa malemy tamin'ny COVID-19 alohan'ny hamerenany ny vokatra ratsy; noho ny fitandremana be dia be dia hijanona mitokana mandritra ny folo andro ny ekipa sisa.
Ny Minisiteran'ny Fahasalamana dia namokatra torolàlana miaraka amin'ny Fahasalamam-bahoaka mba hiantohana ireo toeram-piasana ho azo antoka ho an'ireo mpiasa miverina miasa.
Mandritra ny fanokafana tsikelikely ny toekarena, ny mpampiasa dia takiana amin'ny fampiharana fepetra ara-pahasalamana sy fiarovana, ao anatin'izany ny fanendrena ireo manamboninahitra hampihatra sy handrindra ny rafitra.
Ny mpiasa izay afaka manohy miasa any an-trano dia tokony hanohy hanao izany, raha tsy izany dia tokony hampihatra fepetra toy ny fizarazaran-potoana sy ora fiasana miato ny mpampiasa.
Ny sarontava tarehy sy ny PPE dia tsy maintsy atao arak'izay sahaza sy ilaina ary tsy maintsy hamafisina ny fahadiovana amin'ny fanasana tanana.
Ny fahasalaman'ny olona no laharam-pahamehana voalohany.
Amerikanina LGBT: filana fivezivezena mafy sy drafitra fitsangantsanganana azo antoka na eo aza ny COVID-19
VP Pence tontonana fizahan-tany: Fihetsiketsehana amerikana